ရာဘာလက်အိတ်များကြားတွင်ကြယ်ပွင့်တစ်ခုအဖြစ်နိုက်ထရိုင်းလက်အိတ်များသည်စျေးကွက်အလားအလာရှိရမည်။ ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပစျေးကွက်များကိုကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်နိုက်ထရိတ်လက်အိတ်လုပ်ငန်း၏စျေးကွက်အတိုင်းအတာသည်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းအဆက်မပြတ်တိုးချဲ့လျက်ရှိသည်။ စျေးကွက်သုတေသနအချက်အလက်များအရရော်ဘာလက်အိတ်စျေးကွက်သည်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျနေပြီဖြစ်ပြီးစျေးကွက်တွင်ချဲ့ထွင်ရန်အလားအလာကောင်းရှိသည်။ nitrile ရော်ဘာလက်အိတ်မတော်တဆမှု flapper အဆို့ရှင်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းသည်ဆက်လက်မြင့်တက်နေ ဦး မည်။
နိုက်ထရစ်လက်အိတ်များသည်လူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခါသုံးလက်အိတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားတစ်ခါသုံး nitrile လက်အိတ် acrylonitrile နှင့် butadiene ကနေဖန်တီးအော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကလတ်စ်ကင်းနှင့်မတည့်သည်။ သူတို့သည်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်စျေးကွက်များတွင်အလွန်လူကြိုက်များသည်။ nitrile လက်အိတ်ထုတ်လုပ်မှုလမ်းကြောင်းတည်ဆောက်ခြင်းသည်စျေးကွက်ကိုလျင်မြန်စွာဖွင့်နိုင်ပြီးအမှာစာအမြောက်အများရရှိနိုင်သည်။
အထွေထွေစာမေးပွဲ nitrile လက်အိတ်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၏ဒီဇိုင်းသဘောတရား
နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိသော Chuangmei Intelligent Engineering Team သည်ဆက်လက်တီထွင်ခဲ့သည်။ စက်ရုံနှင့်ဓာတုဗေဒတို့၏ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပ၌လက်အိတ်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများတပ်ဆင်ရန်အခက်အခဲကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကာအမြင့်ဆုံးလက်အိတ်ကို modular assembly တစ်ခုအဖြစ်ဒီဇိုင်းဆွဲသည်။ ကွင်းဆက်သည်နှစ်ဖက်မှို၏လုပ်ဆောင်မှုကိုမောင်းနှင်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အရည်အသွေးမြင့်နိုက်ထရိတ်လက်အိတ်များထုတ်လုပ်နိုင်စေရန်သေချာစေရန်အတွက်လက်အိတ်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းနှင့်အဆင့်မြင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုနှင့်ထိရောက်မှုရှိသည့်လက်အိတ်ထုတ်လုပ်မှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
၁။ ရောနှောခြင်းစနစ် - ရောနှောနေသောတိုင်ကီနှင့်ပိုက်လိုင်းစနစ်မှတဆင့်ကုန်ကြမ်းများ / ပေါ်လီမာ၊
2. အဓိကထုတ်လုပ်မှုလမ်းကြောင်း - ကွင်းဆက်မောင်းနှင်မှုစနစ်မှတဆင့်လက်အားမှိုသည်အပြီးသတ်လက်အိတ်မပြီးမချင်းသန့်ရှင်းခြင်း၊ နှစ်မြှုပ်ခြင်း၊ ကလိုရင်းဆေးကြောခြင်း (သို့) အဖုံးအုပ်ထားခြင်း၊ leaching၊ ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ ပုတီးစေ့ခြင်း၊
၃။ စွမ်းအင်စနစ် - ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၏အဓိကအပူစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုဖြစ်သည့်မီးဖို / သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်အပူပေးရန်ပူပြင်းသောလေမီးဖိုများသို့မဟုတ်ဘွိုင်လာများကိုအသုံးပြုသည်။
ရောနှောခြင်း၊ ကော်တင့်၊ ရေစုပ်စက်နှင့်အခြားဖြစ်စဉ်များအတွက်အရန်စွမ်းအင်ပေးသည့်လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှု၊ စင်ကြယ်သောရေစက်၊
5. ဓာတ်ခွဲခန်းပစ္စည်းကိရိယာများ - အိုမင်းနေသောမီးဖို၊ ဆန့်စမ်းသပ်ခြင်း၊ အထူစမ်းသပ်စက်၊
6. ထုပ်ပိုးခြင်းပစ္စည်းကိရိယာများ - အလိုအလျောက်သုတ်ဆေးစက် / အလိုအလျောက်ရေတွက်စက်အပါအ ၀ င်အလိုအလျောက်စက်ပစ္စည်းများထည့်သွင်းနိုင်သည်။
၇။ အစိမ်းရောင်စက်ရုံများ (ဖောက်သည်မှပြင်ဆင်သည်) - ကလိုရင်းဓာတ်ငွေ့နှင့်စွန့်ပစ်ရေသန့်စင်ရေးစနစ်အပါအ ၀ င်ဒေသခံပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကာကွယ်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤအပိုင်းကိုဖောက်သည်မှပြင်ဆင်သည်။
သာမန်စစ်ဆေးခြင်း nitrile လက်အိတ်များကိုစက်မှုလုပ်ငန်းအချို့တွင်တစ်ခါတစ်ရံလက်အိတ်များမကြာခဏအစားထိုးလေ့ရှိကြသည်။ ၎င်းသည်ကူးစက်ရောဂါကူးစက်မှုကိုရှောင်ရှားနိုင်ရုံသာမကအစားအစာပြုပြင်ခြင်း၊ ဓာတ်ခွဲခန်းများ၊ အီလက်ထရောနစ်ဓာတုပစ္စည်းများ၊ ။
ရှေ့သို့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှု Nitrile လက်အိတ်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
နောက်တစ်ခု: အထွေထွေစာမေးပွဲ nitrile လက်အိတ်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း